Ciddiyaha Ku marooji, drywall Ku marooji, Drivers Ku marooji, Ground Ku marooji - Weifeng
Is siyoodba Ku marooji
Ningbo Weiifeng guntinta Co., Ltd waxaa ku yaal Yuyao City oo waa u fududahay helidda. Waxay qaadataa nus saac in magaalada Ningbo hab sare halka 3 saacadood in Shanghai City by. Shirkadda Our takhasusay hardware tusaale ahaan barroosin, boolal, handarraabbadeedii, nuts iyo qalab. xubnaha waxay leeyihiin waayo-aragnimo badan oo fiican in line duurka this in aan bixino waxyaabaha la tayo sare leh oo qiimo macquul ah iyo sidoo kale adeeg tixgelin our. saarka Ka sokow, waxaan sidoo kale wax ka qabashada toosiyaan dhoofinta iyo wax soo saarka business.Our jira noocyo kala duwan ah, sida ay heerarka soo socda: GB, din, JIS iyo ANSI iyo waxaan sidoo kale aqbali karaan amar ah faahfaahinta kale sida codsiyada macaamiisha Waxaan ku faraxsan nahay in la dhiso muddo dheer markabka la xiriirta iskaashi wanaagsan la macaamiisha our ku salaysan sinnaan iyo faa'iidada.
Boolal Hex dhaqe Head Self Drilling
Hex flange is fur qodista masaxaada
madaxa la tukado digsiga fur is-siyoodba
Phillips madaxa digsiga xir
madaxa digsiga boolal is-siyoodba
Phillips drive fur
Phillips madaxa guri fur is-siyoodba
Cinwaanka: Ku dar: Floor 16, ZhongMu International guri nagaadi, No.398 South NanLei Road, Yuyao, Zhejiang, Shiinaha